Baarlamaanka Kenya oo Dood Kayeeshay khilaafka Soomaaliya | Allbalcad Online
Home WARARKA Baarlamaanka Kenya oo Dood Kayeeshay khilaafka Soomaaliya
Baarlamaanka Kenya oo Dood Kayeeshay khilaafka Soomaaliya
Baarlamanka Kenaya ayaa ka dooday khilaafka diblomaasiyadeed ee haatan ka dhex bilaabmay labada dal. Arintan ayaa daba joogta go’aankii ay Soomaaliya ugu yeedhatay danjiraheeda u fadhiya Nairobi, ee ay sidoo kalena ku wargelisay danjiraha Kenya u fadhiya Soomaaliya inuu dalkiisa wada tashi ugu noqdo.
Dawladda Federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in ay go’aankaa ku salaysay Kenya oo ay ku eedeysay inay madaxweynaha Jubbaland ku cadaadinayso inuu fuliyo ajandaheeda siyaasadeed, taas oo carqaladaynaysa heshiiskii siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya, islamarkaana ka hor imaanaysa hab dhaqanka diblomaasiyadeed ee dawladaha deriska ah.
Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka Kenya ayaa sheegay in Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya ay jawaab wanagsan siisay Dowladda soomaaliya, kadib markii ay qaadatay go’aankii ay Soomaaliya uga saartay Safiirkii Kenya sidoo kale dalkisa kusoo celisay Safiirka Soomaaliya ee Kenya.
Cabdilaahi Bashiir Sheekh oo ah xildhibaan laga soo doorto Mandera North aya dhankiisa sheegay in wax lala yaabo tahay in Soomaaliya xilliga doorashada ololaha ka socda Nairobi uu kaga xamaasad badan yahay Muqdisho , isla markaana la is dhahayo malaha doorashadu Nairobi ayay ka dhacaysaa ee kamaba dhacayso Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Cusmaan Abuukar Dubbe, oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho todobaadkaan ayaa Dowladda Kenya ku eedeeyay inay faragelin ku heyso Arrimaha Soomaaliya, isla markaana Nairobi ay tahay meel looga soo duulo Soomaaliya.
Previous articleSAWIRO:- Banaanbaxyo Xoogan oo ka bilaawday Beledweyne
Next articleKhasaaro ka dhashay dagaal Kadhacay Magaalada Beledweyne